ओमकार टाइम्स छुवाछूत भ्रम र यथार्थ – OMKARTIMES
जुन छुवाछूतको बदनाम गर्दै उपन्यास, फिल्म अादिमा ब्राह्मणको झुटो प्रचार र अनावश्यक रुपमा विवादित बनाइयो, त्यही छुवाछूत आज विश्वको ब्रह्मास्त्र बनेर विश्वको रक्षा गर्दछ । प्राय: आफ्नो शास्त्र को एवं ब्राह्मणको खूब मजाक उडाइएको थियो, जब उनीहरु भन्दथे कि जो व्यक्तिको तपाईं चरित्र जान्नुहुन्न उसबाट जल या भोजन ग्रहण गर्न हुँदैन, किनभने तपाईं जान्नुहुन्न कि अमुक व्यक्ति कुन विचार को हो ? कस्तो शुद्धता राख्दछ ? म कुन गुण प्रधान हुँ ? कस्तो कर्म गरेर उसले धन ल्याएको छ ? कुन स्तरको शुध्दता कायम भएको छ ? कुन तरिकाले भोजन बनाएको छ ? उसको लागि शुद्धताको मापदण्ड के हो ? इत्यादि ।
केही संकुचित मानसिकता भएकाहरुले ब्राह्मणलाई जातिवादी र छुवाछूत बढाउने काम गरेको आरोप लगाउँछन् । यो उनीहरुको मति अनुसारको प्रतिफल हो । वास्तवमै यस्ता अनर्गल प्रचार गर्नेहरुलाई अन्य व्यक्तिको छाया पर्दा पनि छूत लाग्छ। तर वर्तमान समयमा एक कोरोना भाइरसका कारण विश्वका सबै मानिस एक मीटर सम्मको दूरी बनाएर राख्नुपर्ने यथार्थता छ । जो व्यक्ति दूरी बनाउँदैन, उसलाई सजाय दिने काम गर्दैछ । विश्व लकडाउन को पालना गर्न मजबुर छ । जसको चरित्र थाहा छैन, उसलाई स्पर्श गर्न पनि रोक लगाइएको छ । अब बुझ्नुभयो कुरा ? छाया एक माप हो, व्यक्तिबाट व्यक्तिको बीचमा दूरी बनाइ राख्ने ।
शास्त्रद्वारा जब यी कुरा बताइयो कि हरेक ठाउँमा पानी र भोजन लिनुुहुँदैन तब सबैले यसलाइ मूर्खता र discrimination भन्ने गर्दथे ! बडा हाँसो लाग्दथ्यो !!!! बकवास भनेर सबैले आफ्नै शास्त्रको दुत्कार्ने गर्दथे।
तर आज ? यहाँ मानिस विवाहको समयमा वर-वधु को ७ पुस्ता सम्मको अवलोकन गर्ने गर्दथे कि सम्बन्धित पक्ष कुन विचार धाराको थिए ? कुनै जेनेटिक बिरामी त थिएन, कस्तो height को थिए ? कति उमेरसम्म जीवित थिए ? खानदानमा कोही वर्ण-शङ्करको इतिहास त रहेको थिएन । यो सुनिश्चित गर्न सकौँ कि आउने वाला सन्तति विचार र शरीर देखि स्वस्थ्य रहिरहोस र रोगबाट बचिरहोस जसलाई आजको शब्दमा GENETIC SELECTION भनिन्छ । अब हेर्नुस कमाल! अब देश विदेश को हाई सोसाइटी मा जेनेटिक्स सेलेक्शन को आधारमा सम्बध्द बनाउन बल दिंदै गएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
शास्त्रको नियम जलद्वारा नै शरीर शुद्ध गर्दछ भन्ने छ अरु कुनै तत्त्व हैन। यो भन्दा- सुन्दा बडो अनौठो लागेको थियो । तब सबैले बकवास भन्दै आफ्नो गुदद्वार tissue paper ले साफ गर्न थाले । खाना खाएपछि पानीले हात धुनुको सट्टा tissue पेपरले पुछेर “इतिश्री” गर्दथे । तर अब ? जब यही ब्राह्मण र शास्त्रले भन्दथे कि भोजन ब्रह्म समान छ र यही नै सबैको शरीरको समस्त अवयव बनाउँछ । विचारको शुद्धता र परिमार्जन यसैबाट शम्भव छ त्यसैले भोजन चप्पल या जूत्ता लगाएर छुन हुँदैन।
तर यस कुराले धेरैको हाँसो उदाङ्गिन्छ अाज । Obsolete भनेर सबैले खूब मजाक उडाउँछन् । जुत्ता लगाएर खाना खाने चलन सबैले पश्चिमा देशको आसुरी समाजबाट ग्रहण गरे । Buffet system बनाइदिए । ती सबैको मजाक बनाइदिए जो जुत्ता-चप्पल मात्रै होईन लुगा पनि निकालेर भोजन गर्दथे।
हाम्रो कुनै पनि यज्ञ, पूजा-अाजा वा धार्मिक कार्य स्नानादि कार्य गरी पूर्णत: स्वच्छ भएर गर्नुपर्दछ ।पण्डितजिले सबैको हातमा जल दिएर हस्त प्रक्ष्यालनका लागि आह्वान गर्दथे सबैलाई जल छिट्दै मन्त्र भन्दथे :-
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपिवा।
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरः शुचिः ॥
ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ।।३।।
तब पनि सबैले मजाकमै उडाए । जब सनातन धर्म मान्नेवाला कसैको घरमा शिशुको जन्म हुन्छ त्यसबेला सुतक लाग्दथ्यो। यस अवस्थामा ब्राह्मण १०दिन, क्षत्रिय १५ दिन, वैश्य २०दिन र शूद्र ३०दिनसम्म सबैबाट अलग रहन्थे । अनावश्यक रुपमा सुतिकाको घरमा मानिस आउदैन थिए, पानीसम्म पिउँदैन थिए ।
जब सम्म उसको घर हवन या यज्ञद्वारा शुद्धिकरण हुँदैन तबसम्म। प्रसूति गृहदेखि आमा र बच्चालाई बाहिर निक्लन निषेध लगाइएको थियो। आमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैनथिन् न त भोजनालयमा प्रवेश गर्न सक्थिन।
यसको पनि सबैले मजाक उडाए ।
यो कसैले सोचेनन कि यिनीहरु नै बिरामीबाट बच्ने या संक्रमण को बचाउका लागि Quarantine गरिएको थियो या isolate गरिन्थ्यो। प्रसूति गृहमा आमा र बच्चाको पास निरन्तर “बोरसी” सुँघाइन्थ्यो जसमा नीम को पात, कपूर, गुग्गल इत्यादि निरन्तर धुँवा दिइन्थ्यो । त्यो सबै यसकारणले निक्लन दिइँदैन थियो कि उनको immunity यस समयमा कमजोर रहन्थ्यो र बाहिरी वातावरण बाट संक्रमणको खतरा रहन्थ्यो।
तर सबैले फेरि पुरानो चलन भन्दै यसको मजाक उडाए । आज हेर्नुस् ८०% महिला एक delivery पछि रोगको भण्डार बन्न पुग्छिन। कमरको दुखाइदेखि, रगतको कमी हुँदै अनगिन्ती समस्या ।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रको लागि अलग Quarantine या isolatiको अवधि यसकारण ! किनकि हर वर्णको खानपान अलग रहन्थ्यो, कर्म अलग रहन्थ्यो । जसद्वारा सम्पुर्ण वर्ण को शरीर को immunity system अलग हुन्थ्यो जुन उपरोक्त अवधि मा balanced हुने गर्दथ्यो ।
यसैगरी जब कसैको मृत्यु हुन्थ्यो ! तब पनि १३ दिनसम्म त्यस घरमा कोही प्रवेश गर्दैन थियो । यही नै Isolation period थियो । किनकि मृत्यु या त कुनै प्रकारको बिरामीबाट हुन्छ या त वृद्धावस्था को कारण ! जसमा शरीर तमाम रोगको घर नै हुने गर्दछ । यहि रोग हरेक ठाउँमा न फैलियोस ! यसैले १४ दिन को quarantine period बनाइएको थियो ।
जसले शवको दागबत्ती दिन्थ्यो, उसलाई आफ्नै घरकाले समेत छुन मिल्दैन १३ दिनसम्म। उसको खाना पिना, भोजन, बिच्छ्यौना , कपडा सम्पुर्ण अलग गराइ दिइन्थ्यो। तेरौं दिन शुद्धिकरण पछि , केश मुन्डन गरेर बल्ल शुद्धी हुन्थ्यो ।
तब पनि सबैजना धेरै हाँस्दथे ।
bloody hindus भनेर हेप्दथे !!!
जब कोहि रजस्वला स्त्री को ४ दिन isolation मा राखिन्छ ता कि स्वयं पनि बिरामी हुनबाट बचुन् र सबैलाई बचाउन। तब पनि सबैजना पानी पिउंदै पिउँदै भए पनि गाली गर्दथे । र नारीवादको कसले भन्दथ्यो, ऊ त दिमागी स्तरबाट अलग हुन्छन् ।
उनीहरुले जुन जहर उकालेका छन् कि त्यसको मूल्य आज सम्पूर्ण स्त्रीहरु तमाम तरह को बिरामीबाट ग्रसित भएर चुकाइ रहेका छन्।
जब कसैको शव यात्राबाट मानिस आउँथे तब घरमा प्रवेश दिइँदैन र बाहिर नै हात खुट्टा धोएर, स्नान गरेर, कपडा त्यतै निकालेर घर मा आउँथे ।
यसको पनि खुब मजाक बनाए सबैले ।
आज पनि गाउँमा एक परम्परा छ कि बाहिरबाट कोही पनि आउँछ भने उसको खुट्टा धोइन्छ। जब कोहि पनि बुहारी , छोरी, छोरा या कोहि पनि टाढा बाट आउँछन् भने उसलाई तबसम्म प्रवेश दिइँदैन जबसम्म घरको ठूलो मान्छेले पानी लिएर , बेसार हालेर आगन्तुकलाई छर्किएर त्यही जल बगाउँदैन तबसम्म।
खूब मजाक बनाएको थियौ नि?
यिनै सवर्णको र ब्राह्मणको अपमानित गरिएको थियो। जब यी गलत र खराब कार्य गर्नेले मांस र चमडको कार्य गर्नेवाला मानिसको तब सम्म छुंदैन थिए जबसम्म संबंधित ब्यक्ति स्नानद्वारा शुद्ध हुँदैन थिए। यी तिनै ब्यक्तिहरु थिए जो जनावर पाल्दथे जस्तो सुंगुर,भेडा , बाख्रा , कुखुरा , कुकुर इत्यादि जो अनगिन्ती बिरामी आफ्नो साथमा ल्याउन सक्दथे।
कसैले छिटै उसको हातले दिएको पानी या भोजन ग्रहण गर्दैन थिए ! तब बडो हो-हल्ला सबैले मच्चाए र यिनीहरुलाई यति धेरै गाली गरे कि यिनीहरु आफैंलाइ आफ्नै पेशा र आफैं प्रती घृणा हुन थाल्यो।
यिनीहरु नै त्यो गलत काम गर्ने ब्यक्तिहरु थिए!
जो प्लेग, TB , चिकन पक्स जस्ता ज्यानै जाने बीमारको संवाहक थिए ! र जब सबैलाई भनियो कि बिरामी हुनबाट बच्नको लागि तपाईं यीबाट टाढा रहनुहोस् तब सबैले गालिको वर्षा नै यो भन्नेमाथी बर्साए
र यिनीहरुको यति धेरै अपमानित गर्दिएकी बोल्नै छोड्दिए,सम्झाउनै छोड्दिए।
आज जब कसैलाई छुन निषेध गरिएको छ
अनि सबैले यसैलाइ विज्ञान भनेर अपनाउँदै छन्। Quarantine गरिँदैछ अनि सबै खुसी भएर यसलाई अपनाउँदै छन्।
तर शास्त्रको तिनै वचनको त ब्राह्मणवाद/मनुवाद भनेर सबैले बिरोध गरेका थिए विगतमा र अपमानित गरिएको थियो।
आज यो उसैको परिणाम हो जब शास्त्रलाई नै लत्याइएको र तिरष्कार गरिएको कारण पूरा विश्व नै एउटा रोगसँग लड्न असमर्थ छ।
याद गर्नुहोला पहिले जब कोहि बाहिर निक्लन्थे भने आमाले तपाईंको गोजीमा कपूर या हल्दी को गाँठ इत्यादि दिनुहुन्थ्यो राख्नको लागि ।
यी सबै किटाणु प्रतिरोधक हुन्।
शरीरमा कपूर पानीको लेप गरिन्थ्यो ताकि सुगन्धित पनि रहोस् र रोगादि बाट पनि बचियोस् भनेर।
तर यो सबै भुलाइदियो।
धेरैलाई त आफ्नै शास्त्रलाइ गाली दिँदै र ब्राह्मण को अपमानित गर्नमै, उसलाई भगाउन मै जुन आनन्द आउँथ्यो सायद त्यही परमानन्दअन्त कतै मिल्दैन थियो।
अरे मूर्ख हो ! आफ्नो शास्त्रको level को जुन दिन सबै बन्नेछन नि तब यहि देश विश्वगुरु कहलिन्छ।
यहाँ त यसरी आफ्नो शास्त्रमाथि औंला
उठाउँछ कि जस्तो कोही मूर्ख व्यक्तिको मूर्ख ७ वर्ष को छोराले ISRO को काममाथि प्रश्नचिन्ह लगाउँछ।
अझै पनि भन्दछु कि आफ्नो शास्त्रलाई सम्मान गर्न सीक। यसलाई मान। बुद्धिमा शास्त्रको यदि कुनै कुरा घुस्दैन भने केही छैन, सोच कि आफ्नो बुद्धिको स्तर त्यति भएको छैन जति शास्त्र बुझ्न सकौं !
तब त्यस्तो व्यक्तिको साथमा जाओ जसले शास्त्रको कुरालाई सही ढंगले बुझाउन सकोस् । जसले विज्ञान को गहन अध्ययन गरेको छ, उसले वेद, पुराण इत्यादि शास्त्रहरुको कुरा सरल तरिकाले सम्झन सक्छ । Corelate गर्नसक्छ र सम्झाउन पनि सक्छ ।यो लेख नेपाल दर्शनबाट लिइएको हो ।
२०७७ जेष्ठ ३
युवाहरु क्रान्तिमा होइन कृषि क्रान्तिमा लाग्ने हो